Maxkamadda Sare ee Kenya oo soo gaartey go’aan caawinaya qaxootiga dalkaa ku sugan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxkamadda Sare ee Kenya oo soo gaartey go’aan caawinaya qaxootiga dalkaa ku...
(Nairobi) 09 Maarso 2021 – Maxkamadda Sare ee dalka Kenya ayaa ugu yaraan si KMG ah u hakisay go’aankii ay Dowladda Kenya u qabatay in qaxootigu uu dalkeeda uga guuro muddo 2 todobaad ah, gaar ahaan Dhadhaab iyo Kaakuma.
Xeryahaas oo ay ku jiraan qaxooti kasoo kala qaxay dalalka deriska ah ayaa waxaa ay dhan yihiin nus milyan ay nuskood Soomaali yihiin.
Maxkamadda Sare ee Kenyaa ayaa dib u dhigtay go’aanka Xukuumadda Kenya muddo 30 cisho ah.
Sidan oo kale, Kenya ayaa 2013 shaacisay in ay xireyso xeryaha Qaxootiga, hase ahaatee go’aankaas ma dhaqan gelin oo dad yar ayaa baxay 2016-kii.
Previous articleAC Milan oo hal meel uga fiicnaatay kooxaha qaaradda Yurub oo idil (Arag qiimayntan)
Next articleDF oo farriin rasmi ah u dirtay Golaha Amaanka (Arrin ay ka digtey & howl lagu muransanaa oo loo dhiibayo RW Rooble)